कुखुराको मासु किलोमै १६० वृद्धि Arthadaily: Search for truth and fact.
प्रकाशित: २०७६-१०-१७ गते
काठमाडौं । गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चितवनमा चलाइएको अण्डा नष्ट गर्ने अभियान (चिकेन होलिडे) पछि बजारमा कुखुराको मासूको मूल्य आकाशिएको छ ।
चल्ला उत्पादकको आन्दोलनअघि काठमाडौं उपत्यकामा कुखुराको तयारी मासुको प्रतिकिलो मूल्य २१० रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकिलो ३ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
१० दिनसम्म चल्ला उत्पादन गर्ने अण्डा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेपछि मासु व्यवसायीले त्यतिबेलै दुई पटक मूल्य बढाएका थिए ।
कुखुराको मासुको मूल्य बढाएर उपभोक्तामा आर्थिक भार थोपर्न चिकेन होलिडे मनाइएको भन्दै सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको माग थियो तर सरकारले सुनेन ।
व्यवसायीले जुन उद्देश्यका लागि चिकेन होलिडे मनाएका थिए अहिले त्यो पूरा भएको छ । एक महिना अवधिमा कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १६० रुपैयाँले बढेर ३७० रुपैयाँ कायम भएको छ । काठमाडौंको खुद्रा बजारमा मासुको मूल्य त्यो भन्दा पनि धेरै हुनसक्ने उपभोक्ता अधिकारीकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी संघले गत हप्ता तोकेको नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा तयारी मासुको प्रतिकिलो मूल्य ३५० रुपैयाँ छ । जसमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ नाफा राखेर खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा मासुको उपभोक्ता मूल्य ३६५ रुपैयाँ हुनु पर्ने हो तर अधिकांश स्थानहरुमा ३७० रुपैयाँभन्दा बढीमा मासु खरिद–बिक्री भएको छ ।
फार्मिङ एण्ड एग्रिकल्चर रिसर्च म्यानेजमेन्टले उल्लेख गरेअनुसार काठमाडौंमा तयारी मासुको मूल्य ३१५, पोखरामा ४१०, धनगढीमा २८० र इटहरीमा ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो हो । तर बजारमा यो भन्दा धेरै मूल्यमा मासु बिक्री भईरहेको छ ।
राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी संघले बजारमा मासुको मागको तुलनामा आपूर्ति नभएका कारण मासुको मूल्य बढेको बताएको छ ।
‘हप्तामा दुई पटकसम्म मूल्य बढेको छ, अब त हामीलाई पनि थाहै हुन छोड्यो,’ संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेय ढकालले भने । चिकेन होलिडे भनेर चल्ला नष्ट गरेपछि बजारमा मासुको माग अनुसार उत्पादन नभएको उनले बताएका छन ।
‘रोपेकै छैन कहाँबाट फल्ने ? मूल्य त बढ्ने नै भयो, अझै बढ्छ,’ ढकालले निर्धक्कसँग भने ।
वर्षभरिमा कुखुराको मासुको सबैभन्दा बढी माग हुने महिना हो माघ र फागुन । मासु व्यवसायीहरुका अनुसार पिकनिक, बिहे र अन्य कामका लागि अत्यधिक मासुको खपत यो दुई महिनामा हुन्छ । व्यवसायीले यही सिजनको मौका छोप्न चिकेन होलिडेको रणनीति लिएका थिए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकाअनुसार काठमाडौंमा प्रत्येक दिन तीन लाख किलो तयारी कुखुराको मासुको खपत हुन्छ । एक सय ६० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुँदा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै एक दिनमा ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कमाउने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।
‘जे उद्देश्यका साथ चिकेन होलिडे गरेका थिए, त्यो कार्यान्वयन भईरहेको छ, उपभोक्ता मारमा परे,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । अख्तियारप्राप्त सरकारी निकाय अनुगमन र कारबाहीमा चुप बसेपछि व्यवसायीको मनपरी बजारमा देखिएको उनको भनाई छ ।
चिकेन होलिडे निस्प्रभावी बनाउन तालुकदार निकाय वाणिज्य विभागले तत्कालिन समयमा कुनै काम गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने मासुको मूल्यबारे भर्खरै बजारबाट सूचना संकलन गरेको जनाएको छ ।
‘मासुको मूल्य बृद्धिबारे विभागले आज मात्रै सूचना संकलन गरेको छ र अब तत्काल एक्सनमा उत्रिन्छौं,’ विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने । बजार अनुगमन र कारबाही कसरी हुन्छ भन्ने नखुलाए पनि नतिजा देखिने गरी आफूले काम गर्ने उनले दाबी गरेका छन ।